Irrawaddy - Gio, 19/05/2022 - 3:30pm
Repeated clashes are being reported in southern Shan State as the regime deploys large numbers of troops to the area.
The post Myanmar Junta Reinforcements Spark Heavy Attacks appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Gio, 19/05/2022 - 2:53pm
NUG finance minister U Tin Tun Naing reveals more plans to generate income, including putting 60 military-owned properties in Yangon on sale.
The post Myanmar Civilian Government to Sell Off More Junta Property appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Gio, 19/05/2022 - 1:33pm
The post Secret History of Myanmar Junta Chief’s Inya Mansion appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Gio, 19/05/2022 - 11:34am
Current ASEAN chair Cambodia has already welcomed some of the regime’s top generals to ASEAN meetings despite their involvement in atrocities.
The post Cambodia to Invite Myanmar Junta Defense Minister to Upcoming ASEAN Meeting appeared first on The Irrawaddy.
Myanmar News Net - Gio, 19/05/2022 - 10:30am
Irrawaddy - Gio, 19/05/2022 - 8:16am
The post KNLA Captures Strategic Camp From Myanmar Military Near Thai Border appeared first on The Irrawaddy.
Myanmar News Net - Gio, 19/05/2022 - 8:05am
Myanmar News Net - Gio, 19/05/2022 - 7:09am
NAYPYITAW, Myanmar - According to the leader of the local People's Defence Force (PDF) chapter, military supporters gathered forapro-junta rally in the junta's administrative capital of Naypyitaw on Monday morning were targeted inabombing.
Local sources told the press that six people were injured and two vehicles were damaged.
At around7a.m., two explosives detonated near the entrance to Lewe Township
Myanmar News Net - Gio, 19/05/2022 - 7:05am
DVB - Gio, 19/05/2022 - 5:06am
DVB - Gio, 19/05/2022 - 4:58am
DVB - Gio, 19/05/2022 - 4:48am
DVB - Gio, 19/05/2022 - 4:40am
ယူကရိန်းနိုင်ငံ မြို့တော် ကီးယက်ဗ်တွင် အမေရိကန်သံရုံး ပြန်ဖွင့်
ယူကရိန်းနိုင်ငံ မြို့တော်ကီးယက်ဗ်မှာ ရုရှားရဲ့ ကျူးကျော်စစ်ကြောင့် ၃ လကြာ ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သံရုံးကို မေ ၁၇ ရက်က ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
သံရုံးဝင်းထဲမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အလံကို ပြန်လွှင့်ထားလိုက်ပါပြီလို့ သံရုံးရဲ့ ပြောခွင့်ရ ဒန်နီရယ်လန်ဂန်ကမ့်က ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ သံရုံးဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ ဝန်ထမ်းနည်းနည်းနဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လုပ်မယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတော့ လောလောဆယ် ပြန်ဖွင့်မှာမဟုတ်သလို အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ ယူကရိန်းနိုင်ငံဆီ ခရီးမသွားကြဖို့ သတိပေးချက်ကိုလည်း ပြန်ရုပ်သိမ်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်သံရုံးကို ဖေဖောဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ပိတ်ခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ် ၁၀ ရက်အကြာမှာ ရုရှားက ယူကရိန်းကို စတင်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
သံရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာ စစ်ဖြစ်တဲ့ကာလ ပထမ ၂ လမှာ ပိုလန်ဘက်အခြမ်းမှာ ရှိနေခဲ့ကြပြီး မေ ၂ ရက်မှာတော့ သံရုံးတာဝန်ခံ ခရစ္စတီးနားကက်ဗင်ဟာ ယူကရိန်းကို တခေါက် ပြန်လာကြည့်ပြီး အခုတော့ သံရုံးကို ပြန်ဖွင့်လိုက်တာပါ၊
အမေရိကန်နည်းတူ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်တို့ကလည်း ကီးယက်ဗ်မှာ သံရုံးတွေကို ပြန်ဖွင့်ထားလိုက်ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သံမဏိစက်ရုံအောက် ဥမင်အတွင်းမှ ထွက်သည့် ယူကရိန်းတိုက်ခိုက်ရေးသမား ၉၀၀ ကျော်ရှိပြီဟု ရုရှားပြော
DVB - Gio, 19/05/2022 - 4:29am
ယူကရိန်းနိုင်ငံ မာရီယူပိုးမြို့က အာဇော့ဗ်စတယ် သံမဏိစက်ရုံအောက် ဥမင်တွေ ကတုတ်ကျင်းတွေထဲကနေ ထွက်လာတဲ့ ဒဏ်ရာရသူ အယောက် ၈၀ အပါအဝင် ယူကရိန်း တိုက်ခိုက်ရေးသမား စုစုပေါင်း ၉၅၉ ယောက် ရှိပြီလို့ ရုရှားအစိုးရက ပြောပါတယ်။
ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း အာဇော့ဗ်တပ်ခွဲက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအဝင် ယူကရိန်း တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၆၉၄ ယောက်ရှိပြီး သူတို့ထဲက ၂၉ ယောက်က ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၅၁ ယောက်က ဆေးကုခံဖို့ လိုအပ်ပြီး မာရီယူပိုးမြို့ အရှေ့ဘက် ၂၅ မိုင်အကွာ နိုဗိုအာဇော့စ်ခ်မြို့က ဆေးရုံဆီ လွှဲပေးပြီးပြီလို့ ဝန်ကြီးဌာနက ဆက်ပြောပါတယ်။
သံမဏိစက်ရုံထဲမှာ ထိပ်တန်း ယူကရိန်းတပ်မှူးတွေ ကျန်နေဆဲဖြစ်ပြီး အရှုံးမပေးကြသေးဘူးလို့ ဒေသခံ မီဒီယာက ရုရှားလိုလားတဲ့ ခွဲထွက်ရေးခေါင်းဆောင် ဒန်းနစ် ပုရှီလင်ကို ကိုးကားပြီး သတင်းထုတ်ပါတယ်။
ရုရှားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်လွှင့်တဲ့ ရုပ်သံကို သီးခြား လွတ်လွတ်လပ်လပ် စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်တာတော့ မရှိသေးပါဘူး။
DVB - Gio, 19/05/2022 - 4:22am
အိုင်းယက်စ်နောက်ခံလူ တင်ဘာကို ခေါ်ယူရန် မန်ယူအသင်း ဆွေးနွေး
DVB - Gio, 19/05/2022 - 4:21am
မန်ယူအသင်းဟာ နည်းပြသစ် တန်ဟတ်ဂ်လက်ထက် ပထမဆုံး ခေါ်ယူမှုအဖြစ် အိုင်းယက်စ်နောက်ခံလူ တင်ဘာကို ခေါ်ယူနိုင်ရေး ဆွေးနွေးနေပါတယ်။
အသက် ၂ဝ ပဲ ရှိသေးတဲ့ ဟော်လန်လက်ရွေးစင် ယူရီယန်တင်ဘာဟာ ဗဟိုနောက်ခံလူနေရာအပြင် ညာနောက်ခံလူအဖြစ်နဲ့ ကစားနိုင်ပြီး နည်းပြတန်ဟတ်ဂ်က သူနဲ့အတူ တပါတည်း ခေါ်ဆောင်လာဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာပါ။
ယူရီယန်တင်ဘာအတွက် ပေါင် ၃၅ သန်း ပြောင်းရွှေ့ကြေး သတ်မှတ်ထားပြီး ကလပ်နှစ်သင်းအကြား ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နည်းပြတန်ဟတ်ဂ်ဟာ ယူရီယန်တင်ဘာအပြင် နောက်ထပ် ဗဟိုခံစစ်မှူးဖြစ်သူ လီဆန်ဒရို မာတီနက်ဇ်ကိုလည်း ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ Mirror သတင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။
အဆိုပါခံစစ်မှူး ၂ ဦးဟာ အခုနှစ်ရာသီ အိုင်းယက်စ်အသင်းရဲ့ အမာခံကစားသမားတွေ ဖြစ်ပြီး နည်းပြတန်ဟတ်ဂ်က ယူနိုက်တက်အသင်းဆီ ခေါ်ဆောင်လာဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူ မာတီနက်ဇ်ကိုတော့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၂၅ သန်း သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
DVB - Gio, 19/05/2022 - 4:16am
ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားလုမည့် မန်စီးတီးနှင့် လီဗာပူးကွင်းတို့တွင် ဆုဖလား ၂ လုံး ထားရှိမည်
DVB - Gio, 19/05/2022 - 4:15am
ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေ ကစားချိန်မှာ မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူး ၂ သင်းစလုံးရဲ့ကွင်းတွေမှာ ချန်ပီယံဆုဖလား ၂ လုံး ထားရှိသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ကျန်တပွဲအလိုမှာ မန်စီးတီးက လီဗာပူးကို တမှတ်အကွာနဲ့ ဦးဆောင်နေပြီး နောက်ဆုံးလိဂ်ပွဲစဉ်တွေက ချန်ပီယံဖြစ်ရေး အဆုံးအဖြတ်ပွဲစဉ်တွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
မန်စီးတီးအသင်းက အက်စတွန်ဗီလာကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံကစားရမှာဖြစ်သလို လီဗာပူးကလည်း ဝုဗ်အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာပဲ တချိန်တည်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာပါ။
ဘယ်အသင်း ချန်ပီယံဖြစ်မလဲဆိုတာ မသေချာသေးတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုဖလားကို ၂ သင်းလုံးရဲ့ကွင်းမှာ ထားရှိဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ ၂ သင်းလုံးရဲ့ ကွင်းတွေမှာ ဆုဖလားချီးမြှင့်စင်တွေကိုလည်း ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ရစ်ချက်မာစတာကတော့ မန်စီးတီးရဲ့အိမ်ကွင်း အီတီဟတ်မှာ ရှိနေမယ်လို့ တယ်လီဂရပ်ဖ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုဖလား အစစ်ကို မန်စီးတီးကွင်းမှာ ထားရှိမှာဖြစ်ပြီး ပုံစံတူ ဆုဖလားကို လီဗာပူးကွင်းမှာ ထားရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဗီလာကို အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် လီဗာပူးရဲ့ရလဒ်ကို ကြည့်စရာမလိုဘဲ ချန်ပီယံအဖြစ် အောင်ပွဲခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar News Net - Mer, 18/05/2022 - 7:05pm
China's Ministry of Commerce and China National Research Institute of Food and Fermentation Industries Co., Ltd jointly launched the online training course